विशेष फेरिएका प्रश्नहरु : एमाले एक्लैले बहुमत ल्याउला ? वाम दलले दुईतिहाइ पुर्याउलान ? अनि कांग्रेसले कति सिट जित्ला हँ ?
Ujyaalo शनिवार, मंसिर २३, २०७४ ०५:४८:००
लक्ष्मण कार्की / उज्यालो
काठमाडौँ, मंसिर २२ – बहुसंख्यक ठाउँमा अझैपनि मतगणना थालिएको छैन । थालिएका बहुसंख्यक ठाउँको गणना सकिएको छैन । त्यसैले कसले कति सिट जित्ला भन्न सकिने कुरै भएन । तर अहिलेसम्म जति ठाउँमा गणनाका अपडेटहरु आहइरहेका छन्, तिनले भोटको ट्रेण्ड भने अवश्य देखाएका छन् ।
पछिसम्म कायम रहला नरहला भन्न सकिन्न तर शुरुवाती परिणाममा सबैजसो ठाउँमा कांग्रेस उम्मेदवार पछि परेका छन् । अचम्मै लाग्नेगरी ।
पहिलो चरणमा चुनाव भएकामध्ये सोलुखुम्बु, ओखलढुंगा, संखुवासभा, गोरखा १, लमजुङ, मनाङ्ग, मुस्ताङ्ग, रामेछाप, नुवाकोट २, जाजरकोट लगायत क्षेत्रमा कांग्रेस उम्मेदवारले जित्ने आँकलन गरिएको थियो । तर ती सबै क्षेत्रमा कांग्रेसले त्यसअनुसारको मत ल्याउन सकेन । लमजुङमा निकै बेरसम्म अग्रता लिएका दिलबहादुर घर्तीलाई माओवादी केन्द्रका देव गुरुङले पछि पारिसकेका छन् ।
ओखलढुंगामा रामहरी खतिवडाले कतिबेलै अग्रता लिन सकेका छैनन् । कुनैबेला २ हजार मत सम्मले पछि परेका उनले अग्रता १ हजारको हाराहारीसम्म भने झारेका छन् । नुवाकोट २ मा डाक्टर रामशरण महतको अन्तर पनि हजारको हाराहारीमै घुमिरहेको छ । गोरखा २ मा डाक्टर बाबुराम भट्टराईलाई मतको पैंचो लगाएर क्षेत्र नम्बर १ मा चीनकाजी श्रेष्ठको सहज जीत हात पार्ने कांग्रेसको रणनीतिले काम गर्ला या नगर्ला यसै भन्न सकिने अवस्था छैन ।
जाजरकोटमा लोकपृय भनिएका राजीवविक्रम शाही पनि २४ सय मतले पछि परेका छन् । मन्त्री हुँदा राम्रो काम गरेका मानिएका टेकबहादुर गुरुङ मनाङ्गमा र रोमी गौचन थकाली मुस्ताङ्गमा पराजित भएका छन् ।
त्यसो त एमाले र माओवादीले मिलेर चुनाव लड्ने घोषणा गरेदेखि नै कांग्रेसको चुनाव चिन्ह रुख कतै घामको त कतै हँसिया हथौडाको सेपमा पर्ने आँकलन नगरिएको होइन । तर यससँगै के प्रश्न पनि गरिएको थियो भने केन्द्रमा नेताहरु मिल्नासाथ कार्यकर्ता पनि मिल्छन् भन्ने छ ? कार्यकर्ता नेताका दास हुन् र ?
अहिल्यै ठोकुवा गर्नु हतार पक्कै हुनेछ, तर भोटको ट्रेण्ड हेर्दा बाम गठबन्धनका लागि शीर्ष नेताको स्पिरिट कार्यकर्ता तहसम्म पुगेको बुझ्न गाह्रो छैन । दल नै एक बनाउने उद्घोष गरेका एमाले र माओवादी केन्द्रका शीर्ष नेताहरुले मतदाता तहसम्म नै एकताको रसायन पुर्याएको देखिएको छ । यसको सबैभन्दा बलियो प्रमाण हो एमालेका धेरै कार्यकर्ताले भोट हाल्दा मात्र जित्न सक्ने ठानिएका क्षेत्रमा पनि माओवादी उम्मेदवारको अग्रता ।
मतगणना चलिरहेको छ । अपडेट आइरहेका छन् । उत्सुकता बढ्दो नै छ । यससँगै तर हिजोसम्म के सबै ठाउँमा एमालेले हँसिया हथौडामा र माओवादीले सूर्यमा भोट हाल्लान् ? भन्ने प्रश्न अबका केही दिन अरु प्रश्नमा रुपान्तरित हुनेछ ।
के एमाले एक्लैले बहुमत ल्याउला ? अनि माओवादी र एमाले वा अरु पनि वाम दल मिलेर दुईतिहाइ पुर्उलान् ? अनि कांग्रेसले कति सिट जित्ला हँ ?